Rohato RAD140 roahina (1182367-47-0) mpamokatra sy mpamatsy - Factory
Rohamena RAD140 (1182367-47-0)
Ny poeta RAD140 dia heverina ho anisan'ny lehibe indrindra fananganana SARMs any. Ny zavatra lehibe momba ny SARMS dia izany ......
SKU: 1182367-47-0 Sokajy: Serasera Sarmana
Rohe RAD140 vovoka (1182367-47-0) video
Rohamena RAD140 (1182367-47-0) Description
Raw RAD140 roapolo antsoina hoe Testolone (Raw RAD140 volo), izy io dia sela mpanome rindrambaiko solosaina (SARM) izay novolavolan'ny orinasa Radius, ho an'ny orinasa pharmaceuticals, ho fitsaboana ny homamiadan'ny nono sy ny fihenan'ny vehivavy ao amin'ny vehivavy. Testolone dia tena vaovao amin'ny tsena ara-barotra miaraka amin'ny fahitana voalohany ao amin'ny 2010.
Roahina RAD140 roja ho toy ny mpanolontsaina modifier amin'ny endri-tsolosaina tsy mifoka rivotra (SARM). Izany dia mandrisika ireo mpikatroka amin'ny androgen ao amin'ny taolana sy ny hozatra izay manana fifandraisana bebe kokoa noho ny amin'ny taova fitondrana. Vokatry ny RAD140 roja RawXNUMX dia nahazoana laza eo anivon'ny mpanao fampiroboroboana sy ny atleta mikasa ny hampitombo ny isan'ny voanjo.
Rohamena RAD140 (1182367-47-0) Specifications
Product Name Raw RAD140 roja
Anarana simika 2-Chloro-4-(((1R,2S)-1-(5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-2-hydroxypropyl)amino)-3-methylbenzonitrile
Drug Class mpanolontsaina modely (androgen receptor) (SARM)
molekiolan'ny Formula C20H16ClN5O2
molekiolan'ny Wvalo 393.831 g / mol
Monoisotopic Mass 393.099 g / mol
Ny antsasaky ny biolojia Tsy misy angona azo atao
Solubility Water Solubility 0.153 mg / mL
Storage Temperature Mialà amin'ny mari-pana
Rohila RAD140 roja Application Ny roja RAD140 Rohida dia mpanamory ny sela mpanome tsimok'aretina (SARM) ho an'ny fitsaboana toy ny hozatra sy kanseran'ny nono.
Raw roaming RAD140 vovoka (1182367-47-0) Description
Ny RAD140, fantatra amin'ny hoe Testolone, dia antsoina matetika hoe SARM mahery indrindra. Mbola mikarokarin'ny orinasa iray antsoina hoe Radius Health izy io.
Ny endri-tsindrim-pandaminana sy ny endri-tsidin'ny androgen (SARM) dia heverin'ny ankamaroany ho safidy azo antoka amin'ny steroïde.
Inona no mahatonga azy ireo manokana?
Eny, ireo SARM ireo dia mifidy amin'ny zavatra rehetra ataony. Amin'ny alalan'ny fifehezana ny mpanaraka amin'ny androgen amin'ny fomba fifantenana, hahazo traikefa ianao raha tsy manahy momba ny fiantraikany.
Ny mekanisma ao ambadik'ireny fitaovana ireny dia samy hafa tanteraka noho ny fampitomboan-tsakafo.
Ny SARM toy ny Testolone (RAD140) dia manana fihenam-bolo kely be dia be raha oharina amin'ny steroïde izay antony ampiasain'ireo mpanao biriky matetika.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia milaza fa ity modifier mpanentana sela androgen (SARM) ity no zavatra akaiky indrindra amin'ny steroids. Midika izany fa afaka manantena ny fitomboana goavam-be sy ny herin'ny tebiteby. Azonao atao ny manary ny siramamy na dia manamboatra hozatra aza, izay lazain'ny sasany fa tsy azo atao.
Satria tena matanjaka io SARM io, afaka manantena valiny mafy ianao. Noho ny fananana fifandraisana mavesa-danja amin'ny mpanolo-tsinay androgen, io fiheverana io dia heverina ho iray amin'ireo matanjaka indrindra.
Mba hametrahana zavatra amin'ny fomba fijery, ny RAD140 vidy mena dia manana anabolic: androgenic ratio 80: 1.
Ny fitambaran-tsolika manana onabolika avo be dia fantatra fa mpanangona betsaka. Azonao atao ny mametraka mora amin'ny 10lbs amin'ny voan'ny muscat mena amin'ny fikarohana amin'ny SARM.
Raozy RAD140 vovoka (1182367-47-0) Mechanism of Action
Ny RAD140 dia miasa amin'ny fanentanana ny mpikatroka sy ny raozy ao amin'ny vatana. Izy io dia mikendry ireo mpanolo-tsaina ao amin'ny hozatra sy ny taolana ary tsy dia misy fiantraikany amin'ny taovam-piterahana.
Ny fahafaha-manao fisafidianana ny SARM dia tsy mbola takatra tanteraka. Azo inoana fa izy ireo dia miasa amin'ny fidirana an-tsokosoko amin'ny proteinina samihafa noho ny testosterone. Vokatr'izany, dia misy solika sy androgen sasany ihany no mahatonga azy ireo, indrindra fa any amin'ny hozany.
Ny endriky ny RAD140 dia samy hafa amin'ny rafitry ny hormones amin'ny steroid toy ny testosterone. Midika izany fa ny vatana dia tsy afaka manova ny vovony RAD140 amin'ny hormones hafa toy ny estrogen izay mety misy fiantraikany ratsy.
Io fitambarana io koa dia manatsara ny fitomboan'ny taovam-pisefo amin'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny cellule de muscle sy ny proteinina.
Miorina amin'ny fandinihana amin'ny voalavo, ny vovo-dronono RAD140 dia mandrisika ireo mpitsabo ao amin'ny faritra atidoha izay maratra. Izany dia mitondra famantarana antsoina hoe lalana MAPK izay manampy amin'ny fiarovana ny sela.
soa amin'ny Rohdy RAD140 roat (1182367-47-0)
◆ Mitombo ny lanjan'ny muscle
Ny RAD140 dia malaza amin'ny fiombonam-borona ho an'ny fiantraikany amin'ny tsindry. Tahaka ny SARM hafa dia manome fomba iray hampitomboana ny fitomboan'ny taovam-pisefoana izany raha tsy misy ny vokatry ny steroids mahazatra.
Na dia eo aza izany lazaina izany, ny porofo ara-tsiansa ao ambadiky ny vovo-dronono RAD140 dia voafetra.
Amin'izao fotoana izao ihany, misy ny fandalinana piloto iray izay nandinika ny vokatry ny RAD140 amin'ny fitomboan'ny taova. Tao anatin'ilay fianarana dia nandinika dosie samihafa ny mpikaroka tamin'ny totalin'ny gidro 9. Hitan'izy ireo fa ny RAD140 dia mampitombo ny tazomoka mahatsiravina aorian'ny fampiasana 28 andro sisa.
Tsy mbola vita ny fianarana olombelona momba ny RAD140. Na izany aza, ny fitsaboana iray momba ny SARM hafa antsoina hoe Ostarine dia nahita fa manatsara ny habetsaky ny foza sy ny fikarakarana ara-batana amin'ny zokiolona.
◆ Kanseran'ny nono
RAD140 dia mampiseho valiny mahafa-po ho an'ny homamiadana.
Ny karazana homamiadana antsoina hoe androgen sy estrogen receptor positive (AR / ER +) dia mora amin'ny hormones. Ny fitsaboana izay misy fiantraikany amin'ireo mpandray ireo, toy ny SARM, dia mety manana hery mitaona amin'ny homamiadana.
Tao anatin'ny fandinihana samihafa, ny STM RAD140 dia nahasakana ny fivelaran'ny sela AR / ER + amin'ny tsiranoka noho ny fanakanana ny fiantraikan'ny estrogen.
Amin'ny ankapobeny, ny RAD140 dia miseho manaisotra ny gn'ny ESR1. Io sehatra io dia tompon'andraikitra amin'ny fananganana ny fitondrana estrogen. Raha tsy misy solosaina ampy tsara, dia mety hijanona tsy misy hery sy tsy mavitrika ny estrogen.
◆ Ny fiasan'ny atidoha
Androgens koa dia manana anjara toerana manan-danja amin'ny fiarovana ny atidoha. Afaka mampitombo ny fitomboan'ny sela izy ireo, manatsara ny fahatsiarovan-tena, ary mihena ny fihenan'ny beta amyloid. Ny proteinina amyloid beta dia heverina ho antony voalohany amin'ny aretin'ny Alzheimer.
Ao amin'ny fandalinana ny raty, ny atidoha RAD140 dia mitebiteby manohitra ny ratra amin'ny amyloid beta. Fanampin'izany, ny RAD140 sy testosterone dia samy mahomby amin'ny fiarovana amin'ny neurotoxine.
Mahaliana fa misy mpampiasa RAD140 sasany milaza tory tsara, saingy tsy misy ny fikarohana mba hamerenana izany. Mandeha ihany koa ny tatitra momba ny fahaiza-manaony hampiroboroboana ny fahatsaran'ny firaisana ara-nofo - na dia mety hampifandrafiana amin'ny testosteron-tsimok'aretina aza izany.
Ny SARM dia fantatra amin'ny fampitomboana ny hozatry ny areti-maso ary mampihena ny tavy.
Ny fianarana iray monja amin'ny gidro dia mijery ny vokatry ny RAD140 amin'ny hozatra sy ny tavy. Na dia nitombo ny fihinanan-kibo aza, dia tsy mazava ny vokany.
Na izany aza, ny fanadihadiana dia nahita fa ny RAD140 dia manatsara ny haavon'ny kôlesterôla. Ankoatra izany, ny habetsaky ny hozatra dia mety hampitombo ny fampiasana herinaratra mba hampiroboroboana ny fihenan-tsakafo.
Recommended RAD140 vovon-tsolotsaina (1182367-47-0) Dosage
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mihoatra ny 20mg isan'andro. SARM tena mahery vaika izany ka tsy mila maka mihoatra noho ny soso-kevitra.
Ny ankamaroan'ny cycles amin'ny RAD140 mena dia hijinja na aiza na aiza amin'ny 6 hatramin'ny herinandro 8. Indray mandeha, ireo mpikaroka efa za-draharaha dia mety hanosika an'io amin'ny herinandro 10.
Side effects amin'ny Rohdy RAD140 roat (1182367-47-0)
RAD140 dia fanadihadiana tena vaovao. Ny fiarovana sy ny fiantraikany dia mbola tsy voatsabo ara-pitsaboana.
Miorina amin'ny fomba fiasan'ny SARMs, tokony hamokatra latsa-danja kokoa noho ny testosterone ny RAD140. Izany dia milaza, RAD140 dia mbola afaka miteraka ny vokatra hafa mifandray amin'ny testosterone. Anisan'izany ireto:
Ny fitiavam-bavaka / ny fitomboan'ny lehilahy
Ny fitomboan'ny volo eo amin'ny vatana amin'ny vehivavy
Fiovana amin'ny fiara fitondra-tena
Lehilahy baldness / volo volo
Ny haingo sy ny fanahiana / ny fahaketrahana
Miala tsiny sy mandoa
Ny bakteria dia matetika mitatitra ny fihenan'ny volo ho fiantraikany, izay niverin-dalana indray mandeha tsy haka ny RAD140.
RAD140 (Testolone): Famerenana sy fampiasana sy risika
Pier Giorgio Righetti; '' Electrophoresis capillary amin'ny sehatry ny biotechnologie fitadiavana: Ny toetry ny teoria ''
John J. Qu, Wei Gao, Menas Kafatos, Robert E. Murphy, Vincent V. Salomonson; '' Fanaraha-maso an-dàlam-pandinihana eto an-tany: Vol.1: Siansa sy fitaovana ''
Ny fikambanana amerikana momba ny fikarohana momba ny kansera; '' AACR 2017 Proceedings: Abstracts 3063-5947 ''
1 famerenana for Rohamena RAD140 (1182367-47-0)
Nahazo vovony RAD140 mba hitsapana, ny vokatra azo avy amin'ny test dia tena avo lenta sy madio!
Vola SR9009 roat (1379686-30-2)
Row SR9009 roja dia matetika antsoina hoe Stenabolic ary izany dia zava-mahadomelina synthetic izay novolavolaina ho amin'ny tanjona ......
fahafahana: 1240kg / volana
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka (159752-10-0)
Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka, fantatra ihany koa amin'ny MK677, MK-677, MK-0667, ary L-163,191, ...... ..
fahafahana: 1249kg / volana
Rohana LGD4033 vovoka (1165910-22-4)
Ny tahirin-kevitra ara-tsiansa azontsika amin'ny poeta LGD4033 dia manjavozavo ny ankamaroan'ireo porofo tsy an-kiato izay ananantsika ...... ..